gaabinta : ultrasound
aasaasay : 1796
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Strathclyde
Qor at University of Strathclyde
Strathclyde waa meel fiican inaad wax ka barato iyo nolosha ku raaxaystaan ​​waqti isku mid ah. Oo kanu waa meesha aad ka heli karto wax kasta oo nagu saabsan – ka baro sida aan, in waxa on in Glasgow iyo sida loo heli agagaarka.
Jaamacadda waxay ku sii dhisnaatay 1796 sida 'meeshii waxbarasho waxtar leh’ iyo tan weli our mission maanta: in la isu geeyo tacliin heer sare leh ku tacaluqa bulshada iyo dhaqaalaha.
Sida 'meeshii waxbarasho waxtar leh’ University waxaa ka go'an in horumarinta bulshada iyada oo loo marayo dabagalka ee heer cilmi, waxbarashada iyo aqoon is waydaarsi ah, iyo iyada oo loo marayo hawlgelinta hal abuur leh ururada lammaane ee maxaliga ah, heer qaran iyo heer caalami.
Si aad u noqoto hay'ad kala, gartaa keentay cilmi-baarista iyo technology ee taagan caalami ah oo sumcad fiican guud ahaan cilmi, waxbarashada iyo aqoon is waydaarsi ah.
Si loo siiyo a tayo sare leh, waayo-aragnimo waxbarasho adkaa in ardayda oo dhan iyo soo saaraan qalin xirfadeed iyo ganacsiga fiican warshadaha, ganacsiga iyo xirfadaha ee.
Si aad casriga ah ee aannu aragti, fikrado cusub, abuurista fursado cusub oo ku lug yeeshay hawlo iskaashi iyo wada-shaqeeynta istiraatijiyadeed faa'iido u leh bulshada guud ahaan.
Si aad u awood iyo dhiiri dhamaan shaqaalaha si ay u horumariyaan kartidooda buuxda oo ay gacan guusha ee howlgalka University ee.
Si ay gacan horumarinta iyo tayada nolosha of our City, quruun iyo beesha caalamka.
Waxaa naga go'an in aan bixino waxbarasho tayo sare iyo waayo-aragnimo in ardayda oo dhan, eegayn asalkooda. iyaga u Waxyoon si loo horumariyo si ay awoodooda buuxda, soo saara dad xirfad iyo ganacsiga fiican warshadaha, ganacsiga iyo xirfadaha ee.
Our aragnimo ardayga waa in ay xuddun u ah wax kasta oo aan samayn. Jaamacadda ayaa ka dhigtay maalgashiga istiraatiiji ah in ay higsaneysaa in ay waxtara goolka bixinta tayo-sare, waxbarashada cilmi-hogaaminayo oo arday fiican experience.The University ujeedadiisu tahay si ay u siiyaan ardayda oo ay la waxbaridda heer sare ah oo cusub, teknoolajiyada iyo goobaha waxbarashada. Waxaan kaloo doonaynaa in aan ballaariyo fursadaha ay wadahadal, iyo ardayda la siiyo fursad ay ku saamayn our 'jihada of safarka’ sida aynu wada shaqeeyaan sidii looga gun gaari aragtida ah inay noqoto mid ah jaamacada farsamada ee caalamiga ah our.
Waxaan la maalgashado barnaamijyo waxbarasho oo ka jawaabaya wanaagsan a, hab hal abuur leh oo cusub oo na booskaas safka hore ee baridda iyo barashada gudaha iyo daafaha nidaamo. University ayaa sidoo kale dhiiri ardayda in ay door firfircoon ka ciyaaro wada hadalka ku saabsan istaraatijiyad iyo aragtida mustaqbalka.
Accounting & maaliyadda
Chemical & habka injineernimada
Civil & injineernimada deegaanka
Computer & macluumaadka cilmiga
design, soo saaridda & maamulka injineernimada
Electronic & injineernimada korontada
Martigelinta & dalxiiska
maamulka khayraadka Human
xisaabta & tirakoobka
Farsamada & injineernimada aerospace
naqshadaha Naval, badda & injineernimada badda
farmashiyaha & cilmiga Biomedical
Dhaqdhaqaaqa jirka caafimaadka
shaqada bulshada & siyaasadda Social
hadalka & therapy luqadda
Strategy & ururka
Jaamacadda waxaa la aasaasay bishii 1796 xagga doonista John Anderson, professor of Philosophy Dabiiciga ah ee Jaamacadda Glasgowwho tagay tilmaamaha iyo inta badan ee guryaha uu si ay u abuuraan jaamacadda labaad ee Glasgow oo diiradda saari doono “Learning faa'iido leh” - takhasusay maadooyinka wax ku ool ah - “waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee Dadka iyo horumar ah ee sayniska, meel waxbarasho waxtar leh”. Jaamacadda ayaa ka dib loo magacaabay xarunteeda bartamaha magaalada isaga ka dib.
In 1828, hay'adda waxaa magacooda loo baxshay University Anderson ayaa, qayb ahaan fulinta aragti Anderson ayaa laba jaamacadood ee magaalada Glasgow. Magaca beddelmay ee 1887, si ay u muujiyaan xaqiiqada ah in aanay jirin awood sharci isticmaalka horyaalka ee 'jaamacadda'. Sidaas darteed, ee Glasgow iyo West of Technical College Scotland, waxaa la sameeyay, noqday College Royal Farsamada ee 1912, iyo Royal College of Science iyo Technology ee 1956 xoogga on sayniska iyo cilmiga injineeriyadda iyo cilmi-baarista. ardayda shahaadada u ciyaari karo degrees oo ka tirsan jaamacadda Glasgow ama Associate ee u dhigma ee Royal College of Science iyo Technology (labada cirif).
Under Maamulaha Samuel Curran, caalamka ixtiraamo jirka nuclear (iyo hindisa of counter scintillation ah), Royal College helay Status University, qaata Charter ay Royal si ay u noqdaan The University of Strathclyde ee 1964, biirtay College Scottish Ganacsiga waqti isku mid ah. Ku lidi ah aaminaada, The University of Strathclyde aan la abuuray oo sabab u ah Report Robbins ah - go'aanka inuu ku siiyo darajo ee jaamacadda College Royal ayaa la sameeyey horaantii 1960, laakiin dib u sabab u ah Robbins Report. The University of Strathclyde ahaa jaamacadda ugu horeysay farsamada ee UK ayaa ka tarjumaysa taariikhda, waxbaridda iyo cilmi-baarista heer sare ee waxbarashada farsamada. In 1993, ka Jordanhill College daro University of Education.
Jaamacadda ayaa soo saartay ay sumcad iyo koray ka qiyaastii 4,000 ardayda wakhti buuxa ee 1964 in ka badan 20,000 ardayda 2003, marka ay u dabaal-guuradii 100aad ee la dul saarin of dhagax dhigay dhismaha asalka ah kuliyada Royal College.
In July 2015, Her Majesty Queen ayaa ayaa furay Technology iyo Innovation Center (TIC), at the University of Strathclyde.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Strathclyde ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Strathclyde rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Strathclyde
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Strathclyde.